120Brasilia 2018 Rikoooo EMB XNUMXBrasilia
120Brasilia 2018 Rikoooo EMB XNUMXBrasilia 2 afọ 1 izu gara aga #1129
M ebudatara ngwungwu a. Mgbe m gara ịgbanwe ụgbọ elu abata FSX Steam. Aircraftgbọ elu ahụ enweghị ebe a na-enweghị eserese. Faịlụ ahụ dị na craftgbọ elu cfg. nwee arụmọrụ niile dị ebe ahụ. Biko ị nwere ike ị nyere aka
120Brasilia 2018 Rikoooo EMB XNUMXBrasilia 1 afọ 11 ọnwa gara aga #1144
Họrọ "Gosi ihe niile di iche" checkbox na ala ala aka nri nke ihuenyo nhọrọ.
Oge ike page: 0.327 sekọnd